အင်တာနက် စာမျက်နှာများ လျှို့ဝှက်ဖတ်ရှုနည်း — မြန်မာဌာန
Ill always listening to rfa.
မသိတာေတြ ေၿပာၿပတဲ.အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..အဲလိုေၿပာၿပမွလဲ က်ေတာ္တို.ေတြ နိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေတြသိမွာေပါ.
RFA ဝိုင်းတော်သားအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်
R F A ကို ကျေးဇူးပါ
အခုလုိသိရတဲ႔အတြက္ အခဲအခက္ရွိတဲ႔အခါ သုံးရတာေပါ႔။ ေက်းဇူးပါ။
pls explain , how is use your-freedom software sir. i am now want use your-freedom software.
အေတာ္ကေလး ျပည္႕ျပည္႕စံုစံုေဖာ္ျပေပးထားတာမို႔ ေက်းဇူးပါ....
တနိုင်ငံလုံးဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တသင်းအားလုံးကို ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် gtalk
WiFi Password ဖော်နည်းကို အလွယ်ကူဆုံး နည်းလေးလည်းပြောပေးစေချင်ပါတယ် အခုကြောင်းအရာက ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးပါ
ပြည်တွင်းဝင်ရောက်ပြီး ရုပ်သံ ရေဒီယို စာနယ်ဇင်းများ ထုတ်နိုင်အောင် လုပ်စေ့ချင်သည် ။ အပျော်တမ်းသတင်းထောက်များ ဖိတ်ခေါ်စေလိုသည် ။ လိုအပ်ပါက သင်တန်းပေးစေလိုသည် ။စိတ်ဝင်စားသည် ။ဝါသနာပါသည် ။
ဤနေရာတွင် RFA သတင်းများကို
ရသည့်အတွက်လဲ RFA မှသတင်းပြန်ကြားသူများကိုလဲ